Izincwadi ezijabulisa kakhulu, imisebenzi ekhethwe kakhulu yezikhathi zamuva | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezihamba phambili ze-Thriller
UJuan Ortiz | | Abalobi, Amabhuku, eziningana
Emibhalweni yesimanje kuyaqondakala ngokuthi "izincwadi ezihamba phambili Thriller”Kuleyo misebenzi ebhalwe ngamanani amakhulu okusola, ukulindela, ukukhathazeka nezimanga. Ngaphandle kokwethula izindima ezinencazelo edidayo, ababhali abavelele balesi sigaba sezinganekwane bavame ukudlala ngokubandlululwa kwabafundi uqobo.
Imvamisa, Inhloso yombhali ukufaka ukubonakala kuzethameli ngesakhiwo esiyinkimbinkimbi, esiholwa ngabalingiswa abanokujula okukhulu kwengqondo. Lapho, ayikho into (into, umuntu, umbono, izilungiselelo, izincazelo zezinzwa ...) ezibekwa ngokungahleliwe, futhi nemininingwane emincane kakhulu ibalulekile kumphumela.
1 Uhlu lwezincwadi ezihamba phambili ze-Thriller
1.1 IPelican Report (1992), kaJohn Grisham
1.2 IHart's War (1999), kaJohn Katzenbach
1.3 IShutter Island (2003), nguDennis Lehane
1.3.1 Isakhiwo nomongo
1.4 Ngenkathi ulele (2011), ngu-Alberto Marini
1.5 Idoli Lokulala (2012), nguJeffery Deaver
1.5.1 Isakhiwo ne-synopsis
Uhlu lwezincwadi ezihamba phambili ze-Thriller
Nalu uhlu oluphelele lwezincwadi ezimele kakhulu kulolu hlobo:
Umbiko we-pelican (1992), nguJohn Grisham
Iphephabhuku lePelican —NgesiNgisi - yinoveli yesithathu yombhali waseMelika nosopolitiki owine izindondo John Grisham. Umbhali uthathwa njengesethenjwa esinganyakaziswa ngaphakathi kwezincwadi zanamuhla zaseNyakatho Melika kanye nesiko lama-Anglo-Saxon ngokujwayelekile. Futhi lokhu akumangazi, ngoba, ngaphandle kokuthengisa izincwadi ezingaphezu kwezigidi ezingama-300, ukuguqulwa kwamafilimu ezindabeni zabo kube yimpumelelo enkulu yebhokisi lamabhokisi.
Lo msebenzi uqukethe zonke izinto ze- Thriller Amaphoyisa aphenduke othengisa kakhulu. Lokho wukuthi, abalingiswa abanokujula okukhulu kwengqondo, intuthuko enama-twist angalindelekile kanye nesitayela sokulandisa esihlekisayo njengoba silutha kubafundi. Vele, awukwazi ukuphuthelwa umbulali obani ubunikazi bakhe nezisusa zakhe ezidida wonke umuntu ekugcineni kwendaba.
Kulokhu, ukushona kokuqala (okusolwa ukuthi kuxhunyanisiwe) yilokho kwabahluleli ababili abasezingeni eliphezulu, oyedwa ovulekile futhi oyedwa olandelanayo. Ngokwalesi sizathu, Inqubekela phambili yocwaningo ilandelwa eduze ngabezindaba nombono womphakathi. Yize ubulelesi buqaphile, umfundi wezomthetho (uDarby Shaw) ubonakala exazulula imibuzo ephathelene nokubulawa kwalaba bantu.
Umbiko wePelican ...
Impi kaHart (1999), nguJohn Katzenbach
Ngenkathi uJohn Katzenbach esaziwa umhlaba wonke nge Isazi sokusebenza kwengqondo (2002)Lokhu akusho ukuthi imisebenzi yakhe yangaphambilini ayinabunono obuningi. Empeleni, Impi kaHart ingenye yamanoveli amahle kakhulu alo mbhali waseMelika ogxile emibhalweni esolisayo. Ngokwengeziwe, kule ncwadi uKatzenbach uhlola eminye yemizwa ephansi yomuntu.
Ekushiseni kweMpi Yezwe II, uLieutenant Tommy Hart Wezindiza ubanjwa ngemuva kokuba yedwa owasinda ekuqothulweni kwethimba lakhe lonke.. Ugcinwe eStalag Luft 13 (eBavaria, eJalimane) kanye namanye amasosha ohlangothini lwe-Allied. Ngokushesha ngemuva kwalokho, uHart ubuka njengoba ezinye iziboshwa zithola ukufika kwesiboshwa sase-Afrika-saseMelika, uLincoln Scott, ngokusola.
Yize ebuye abe nguLieutenant Emabuthweni Ahlanganyelwe, uScott uyabandlululwa ngenxa yebala lakhe lesikhumba. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, esinye seziboshwa sitholakala sesifile kanti uScott ubhekene necala. Ngakho-ke, UHart kumele asebenzise zonke izifundo zakhe zomthetho ukuzama ukusindisa umuntu wakubo emgwebeni oxegisiwe. Uma ehluleka, isosha elingenakuzisiza lizobulawa nakanjani.
Impi kaHart (MAXI)
Ukuvala Island (2003), nguDennis Lehane
Ihlobo lika-1954; usuku lwempi ebandayo. UKhomishane wase-US uTeddy Daniels nozakwabo uChuck Aule bafika esibhedlela i-Ashecliffe for the Criminally Sick eShutter Island. Basemkhankasweni wokuthola umbaleki oyingozi kakhulu ogama lakhe linguRachel Solano. Kodwa-ke, kunesiphepho esihlasela lesi siqhingi ngemuva nje kokufika kwabaphenyi.
Esibhedlela akukho okubonakalayo… Ngendlela efanayo, uDaniels ubonakala enenhloso yakhe mayelana nesikhungo sabagula ngengqondo. Futhi ngukuthi unentshisekelo enkulu yokuthola mayelana nokuhlolwa ngezidakamizwa zokuhlola nokuhlinzwa okuyingozi okwenziwa esibhedlela. Ngaphezu kwalokho, Ubufakazi obuyimfihlo obuphikisana nobuchopho beSoviet buyaphazamisa impela.
Njengoba uphenyo luqhubeka, uChuck uqala ukuzibuza ukuthi - ngaphezu kokukhathazeka okukhulunyiwe - uTeddy unezinye izizathu zokuza kulesi siqhingi. Noma kunjalo, lokho kuncane kwezinkinga zakho, ngoba bazizwa bekude kakhulu ekutholeni iqiniso futhi othile uhlose ukubahlanyisa… Bangase bangakwazi ukuphuma eShutter Island.
Njengoba ulele (2011), ngu-Alberto Marini
Ekuqaleni umbhalo we Njengoba ulele yakhulelwa iskripthi sefilimu lesici esingaziwa eliholwa nguJaume Balagueró. Kodwa-ke, umbhali uthathe isinqumo sokubhala le noveli ukuze ahlole ngokujulile i-psychology yabalingiswa abaphambili. Ngendlela efanayo, encwadini iMarin inesikhala sokuchaza ngokuningiliziwe ezinye zezimo ezingabonakali efilimu.
UCillian, umphathi wesakhiwo eNew York, uyindoda embi engakwazi ukuzizwa yanelisekile noma ukwenza umqondo wobukhona bayo. Ngokusobala, ukuphela kwento ebonakala inika lo mlingiswa injabulo ethile ukucekela phansi injabulo yabanye abantu. Ngalesi sizathu, uhlose ukonakalisa impilo kaClara, umqashi wefulethi 5B, onobuntu obuphikisana naye ngokuphelele.
Ku-inri omkhulu we-protagonist, uClara uvame ukubhekana nobunzima ngesimo esihle nokumamatheka. Ngokulandelana, UCillian —unazo zonke izikhiye zesakhiwo ngoba uyisicabha— uqala umdlalo omuncu wokucekela phansi uClara. Kungumkhuba we-macabre (okungekhona ukufa noma ukuhlushwa), afisa ukuwenza lapho engena endlini yakhe ngenkathi elele.
Njengoba ulele ...
Unodoli olele (2012), nguJeffery Deaver
Ngo-1999, yinye kuphela intombazane eyasindiswa ekubulaweni (ifihlwe phakathi konodoli bayo) nguDaniel Pell, owabulala wonke umndeni wakhe.. Ngalesi sizathu, abezindaba babiza le ntombazanyana ngokuthi "unodoli olele." Ngokunjalo nemibono yomphakathi yabhabhadisa umbulali "njengendodana kaMason" ngenxa yeqembu lakhe labalandeli abashiseka ngokweqile abakwazi ukumenzela isihluku.
Kamuva, lapho lesi sigebengu siboshwa futhi siphenywa ngemibuzo yi-ejenti uKathryn Dance - onguchwepheshe wolimi lomzimba - wethuka kakhulu njengoba emthakazelisa. Isizathu: UPell akayona nje enye isiqhwaga. Ngemuva kwalokho, Lapho uDaniel eqa ejele futhi eqhubeka nemikhuba yakhe yokubulala, uDance uphoqeleka ukuba amzingele ... yize ebeka engcupheni isikhumba sakhe.
Unodoli olele ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi ezihamba phambili ze-Thriller
Ngifunde umbiko we-pelican isikhashana esedlule, futhi iqiniso liyamangalisa. Kunconywe kubo bonke abathandi balolu hlobo.
UCharles Dickens. Ezinye izincwadi ezingaziwa kakhulu zombhali waseNgilandi
Izincwadi ezinhle kakhulu zokumiswa